Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): September 2016
at 9/26/2016 09:08:00 PM
Ya hkyak hkyak shi ga.
Kamram ai hpyen du kaba kawn shana wa ai.
Mana shawng shana modo 17,
mana yup tung modo 12,
yong 27 ရေလှိုင်းတဆိပ် တစ်ဗျူ ဟာ n-gun 300 jan Ja Pu,
Dabak lapran kaw but nga ma ai.
shani kaang kon Nhkram de lung na masing re.
Dai na du na re, hpot ni gaw ပွဲကြီးပွဲကောင်း rai sana.
Ye Howa Karai gaw an hte rau rai nga ai.
Yawng kyu hpyi n gun jaw nga ga.
at 9/26/2016 08:48:00 PM
Lahpai Naw Ming,aFounder of Kachinland News, Passes Away
at 9/24/2016 09:49:00 AM
Lahpai Naw Ming, one of the founders and chief reporter of the Kachinland News, passed away friday at his Mai Ja Yang home at 10 pm. He is survived by his wife andadaughter.
Sara Naw Ming, often referred by Kachin youths for his dedication, was wounded by the Burmese military fire while reporting for the battle news from KIA frontline Kawngwai post, near Loije on Jan 4, 2012. He has finally succumbed to the injuries from the wound after years of enduring pain.
Sara Naw Ming was born in Mantong,avillage in Namtu Township in northern Shan State. He attended Basis Education High School No. (1) in Lashio. He studied at the Myanmar Institute of Theology (MIT) and University of Distance Education (Mandalay).
He was interrogated and briefly detained for producingaKachin documentary titled “Galoi Mi She” translated as “When will it be?” during school years at MIT with fellow members of Kachin students’ association. After his graduation, he served asaminister at Mantong Kachin Baptist Church andalecturer at Kutkai Theological Seminary.
He later settled in Mai Ja Yang and founded Sinpraw Bum Media, making documentaries and providing media training to youths in KIO administrative area.
Naw Ming was awarded the third Pyitu Gon Yee, the Citizen of Burma Award on May 27, 2012 for his service to his people.
Battles Intensify As Burmese Army Continued its Attempts to Seize KIA’s Frontline Posts
at 9/24/2016 09:44:00 AM
KIA sources said Burmese army troops made several attempts last week to seize KIA’s Nhkram Gidon post, located near Laiza on the road between Myitkyina and Laiza in Sama County, and Lai Hpawng post, located in Gara Yang area in Sadung County. Burmese army will not stop their offensives until they have those two frontline posts, saidaKIA officer.
A combined force of about 300 Burmese army troops from 50th LIB, 121st LIB, 260th LIB, and 381st LIR on Wednesday launched another attack on KIA’s 252nd Mobile Battalion’s Nhkram Gidon post from three directions at around 7:30 am. This is the fourth time that Nhkram Gidon post has been attacked inaweek. KIA sources said Burmese army troops fired several 60 mm, 81 mm and 120 mm mortar rounds from Kagam, Nhkram and Sama junction. About 200 soldiers from Myitkyina have reinforced Burmese army in two days and some are still on the way, reportedalocal source.
The same frontline post was attacked yesterday with several artillery shells at around 5:15 pm. KIA sources said Burmese army troops approached Nhkram Gidon post from two directions following artillery attacks. Gang Dau Yang-based Burmese army’s artillery unity fired3rounds of 105 mm howitzer on KIA positions near Nhkram on Sept 19 at around2pm. Burmese army’s artillery unit currently based at Lapai Kawng reportedly fired2artillery rounds on Nhkram Gidon post on Sept 18 at 10 pm, reported KIA frontline sources.
Burmese army’s artillery unit currently stationed at Dingga on Wednesday fired several artillery rounds on KIA’s Lai Hpawng Kawng post at 7:30 am. Lai Hpawng post was attacked with 8 mortar rounds on Sept 19 at7pm. In last week,acombined force of Burmese army’s 16th LIR, 50 th LIB, and 86 th LIB launchedaground assault on KIA’s Lai Hpawng Kawng Post followed by 20 artillery rounds. Kagam Bum- based Burmese army’s artillery unit reportedly fired several 120 mm mortar rounds on Lai Hpawng post on Sept 19 at 3:30 pm.
Burmese army’s artillery units from Nahpaw and Kagam on Wednesday reportedly fired several artillery rounds on KIA frontline positions beginning early in the morning.
In northern Shan State, A battle took place Tuesday between KIA’s 17th Battalion troops and Burmese Army troops under 99th Light Infantry Division at Shan Htung Bum in Kunlong Township at 10 am, reportedaKIA frontline source. The source said the two sides encountered at Shan Htung Bum as Burmese Army troops encroached into Gang Ming Pang Hak area. The battle lasted for about three hours.
KIA’s security forces battled an unknown Burmese army unit near Gara Yang in southern Kachin State on Sept 20 at 6:15 am.
Meanwhile, several abuses against civilians have been reported as battles intensified between the KIA and Burmese army.
Burmese army troops reportedly stopped local travelers on Hpakant road, Bhamo road, and Myitkyina road and searched their cell phones. Soldiers’ cellphones searches of local passersby in the street at Katsu village have been reported on Sept 20.
Sources in Kutkai said Burmese Army troops interrogated 10 Mung Si villagers and detained them at its base in Mung Si in northern Shan State on Sept 19.
KIA ဌာနချုပ် နယ်မြေ လှုပ်ရှား တပ်ရင်း ၂၅၂ ၏ Nhkram Bum , Gidon post ကို ထိုးစစ် ဆင် ဖို့ြ
at 9/23/2016 10:02:00 AM
Voice Of Kachin.
KIA ဌာနချုပ် နယ်မြေ လှုပ်ရှား တပ်ရင်း ၂၅၂ ၏ Nhkram Bum , Gidon post ကို ထိုးစစ် ဆင် ဖို့ ပြည်သူ စစ် LaSang AungWa အဖွဲ့ မှ အင်အား (၃၀) ခန့် သည် မြန်မာ စစ်တပ် ဖက်မှ စစ်ကူ အဖြင့် တိုက် ကူ ရန် ယနေ့ ညနေ ၈း၃၀ နာရီ ခန့် ကထွက်ခွာ သွား ပြီး ဖြစ် ကြောင်း သသင်း ရရှိ ပါသည်။
မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် လမ်း အရှေ့ဘက် တရုတ်နယ်စပ် တလျှောက် KIA ဗဟိုဌာနချုပ် နယ်မြေများ လုံခြုံရေး အတွက် Nhkram Bum စခန်းသည် KIA ၏ စစ်ရေး မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသော စခန်းလည်း ဖြစ်သည်။
22/9/2016 ya shana 8:30pm ten hta Lasang Awng waaP.T.Ts hpyen hpung ni n-gun (30) jan hpe La Ja hte Gam Ba yan woi awn let Gidon post htim na matu n-gun jat rawt wa sai lam shiga na chye lu ai.
at 9/23/2016 10:00:00 AM
at 9/23/2016 09:07:00 AM
Saiga Brang and 22 others shared Khine Min Myat's post.
Khine Min Myat with Bo Thant and4others.
မောင်တောတွင်ဖမ်းမိသောWY စိတ်ကြွဆေးပြား သိန်း ၆၀ ကျော် အဓိကတရားခံများမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံပြီ
ကျေးဇူးပြုပြီး Share ပေးကြပါ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ စိတ်ကြွဆေးပြား သိန်း (၆၀) ကျော်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များသည် ယမန်နေ့က ဖမ်းမိခဲ့ကြ သည်။
မောင်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးကျော်မြဝင်းမှ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် မောင်တောမြို့အဝင် သုံးမိုင် အုတ်သဲ ကျောက်လုပ်ငန်းဝင်းအတွင် အုတ်ပုံထဲတွင် သိုဝှက်ထားသည့် WY စိတ်ကြွ မူးယစ် ဆေးပြား ခြောက်ဆယ့်နှစ်သိန်း သုံးသောင်း သုံးထောင် ရှစ်ဆယ် (၆၂၃၃၀၈၀) ကို ရှာဖွေ ဖမ်းမိခဲ့သည်။
၎င်းနောက် မောင်တောမြို့ လသာရွာမှ နုရူလာမိန်မှာအိမ်ကို ဆက်လက် ၀င်ရောက်ရှာဖွေရာ နောက်ထပ် WY စိတ်ကြွ ဆေးပြား ၆၈၂၅၀၀ ကို ထပ်မံ ဖမ်းမိသည်။
ထိုသို့ ထပ်မံ ဖမ်းမိခြင်းမှာအုတ်သဲကျောက် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် တရားခံ ညီချစ် လွတ်မြောက်နေတဲ့ အတွက် ထပ်မံ စောင့်ကြည့် ရှာဖွေရာမှာ အုတ်ပုံ အတွင်းမှ ပီနံအိပ် ၂၇ လုံး ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက WY ဆေးပြား ၆၂၃၃၀၈၀ ကို ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာဘဲ သတင်း အရ လသာရွာ နုရူလာမိန် အိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွယ်ရာ အိမ်သာခန်းထဲမှာ နောက်ထပ် ၆၈၂၅၀၀ ထပ်မံ ရှာဖွေ တွေ့ရှိပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဆေးပြားများ၏ ကာလတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၃၈၀၀ ကျော်ဖိုးရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုသို့ စိတ်ကြွဆေးပြားများ စံချိန်တင်ဖမ်းမိခြင်းနဲ့ ပက်သတ်၍ အုတ်သဲကျောက် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးညီချစ်၏ယာဉ်မောင်း မိုးဇော်ဦး (၂၈ နှစ်) နှင့် ကျောက်ခွဲစက်လုပ်ငန်းစာရေး ရှောင်ရှုဇူဟာရ် (၃၂ နှစ်) အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်
အုတ်သဲကျောက် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးညီချစ်မှာ
ဆေးပင်စင်ဖြင့် တာဝန်မှ ရပ်နားပြီး အုတ်သဲကျောက်ကို အရောင်ပြကာ
မြန်မာ့တပ်မတော်၏မူးယစ် စီးပွားရေးများတွင် လျှို့ဝှက်စွာ ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရသည်။
ဤမျှများပြားသော မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဦးညီချစ်အနေဖြင့် ယခုတစ်ကြိမ်တည်း သယ်ယူရောင်းချနေခြင်းမဟုတ်ပဲ ယခင်နှစ်များကပင် မြန်မာ့ တပ်မတော်၏ အဆက်သွယ်များဖြင့် ပါကစ္စတန် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ISSIS များထံသို့ အကြိမ်ကြိမ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယဉ်မောင်း မိုးဇော်ဦးမှ ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့လေသည်။
ယခုဖမ်းဆီးရရှိမှုမှာ မောင်တောမြို့နယ်တွင်း စံချိန်တင် အများဆုံး ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြစ်ပြီး
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အဓိကဝင်ငွေ ပင်မလမ်းကြောင်းဖြစ်နေ၍ မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်စုံစမ်း အရေးယူဖော်ထုတ်သွားမည်ကို
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီးတို့ထံ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးကျော်မြဝင်းက ပြောကြားသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ကာကွယ်မှုတာဝန်ယူထားကြသော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သတ် ကျူးလွန်နေသော ကြီးလေးသည့် ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်နေသောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တို့ပါဝင်ဖြေရှင်းသင့်တယ်"ဟု ရဲမှူးကြီးမှပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ မူးယစ်ရာဇဝတ်မှုများကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ကျူးလွန်နေခြင်းမှာ ယခုတစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်ပေ
အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလတွင်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းထဲတွင်လည်း အစိုးရ အရာရှိများ၏ မှူးယစ်စိတ်ကြွဆေးများကို အကြိမ်ကြိမ် ဖမ်းမိခဲ့သော်လည်း အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလမို့ အရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။
ယခုတစ်ကြိမ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ မည်သို့ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည်ကို စောင့်ကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။
Khine Min Myat(ပြန်လည်မျှဝေသည်)
at 9/20/2016 10:58:00 AM
September , Yangon, Myanmar ·
"Divide and Conquer" ngu ai masa hpe chye Na yang Anhte Wunpawng Myusha ni Kade hkrak Na....???????
lawan dum ga law...
ခင်များတို့ ပြောနေတဲ့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးဆို တာ ဒါလာ....
at 9/18/2016 10:26:00 AM
အမေရိကန်န်နိုင်ငံ ရှိ Kachin Alliance အား (17,9,2016) ရက်နေ့ တွင်
New York,မှာ ပြုလုပ်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တိုင်းရင်းသား များ၊
မြန်မာ အဖွဲ့ အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲ သို့ ကချင် တိုင်းရင်းသား များ ကိုယ်စား
တက်ရောက်ရန် မြန်မာ သံရုံးမှ ဖိတ်ကြားထားပါသည်။
ကချင် အဖွဲ့ကို ဖိတ်တုန်းက (၂)မိနစ် စကားပြောခွင့်ပြုမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ
ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက ပြောတယ်။
ကချင်အဖွဲ့က ဆန်ရှင်ကို ဆက်ထားဖို့ ကျေညာချက်ထုတ်တော့ သံရုံးက
ကချင်အဖွဲ့ကို စကားပြောခွင့် ပေးတော့မှာမဟုတ်ကြောင်း အကြောင်း
အစက ကချင်အဖွဲ့က ဒေါ်စု မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီး တက်ရောက်မယ်
ဒါပေမဲ့ သံရုံးက တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်စား စကားပြောခွင့် ကို "ချင်း "အဖွဲ့
ကိုပဲ လွှဲအပ်ထားကြောင်း ဖိတ်ကြားထားခြင်းခံရတဲ့ Kachin Alliance ဥက္ကဌ
ထံသို့ မြန်မာ သံရုံးမှ ဖုန်းဆက်ပြောလာ တယ် ဒီလိုပြောလာတဲ့ မြန်မာသံရုံး
ကို Kachin Alliance ဥက္ကဌ မှ ဒီ အပြောင်းအလဲ ကို ဒေါ်စု ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
လုပ်တာ လား ဟု သေခြာ ပြန်မေး တော့ ၄င်း ဆုံးဖြတ်ချက်အား မြန်မာသံ
အမတ် မှ ဆုံးဖြတ် သည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားတယ်။
(Kachi Alliance သည့် ၀ါရှင်တန်ဒီစီ တွင် ရုံးစိုက်ပြီး ကချင် နှင့် တိုင်းရင်းသား
များ အရေး အိမ်ဖြု တော်၊ US အစိုးရ နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံ ပြောဆိုနေသော
အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။)
ဒီလို ပြောလာတာ့ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကြားမှာ သွေးခွဲ နေခြင်း၊
စိတ်ဝန်းကွဲအောင် ကစားနေတယ်လို့ ခံစားမိလို့ ကချင် အဖွဲ့မှ မြန်မာသံရုံးက
ဖိတ်ကြားထားသည့် ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ဖို့ပွဲ ကို မသွားတော့ဘူး ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်
လိုက်တယ်။ (ဒေါ်စု- ကိစ္စကို ဒေါ်စု ခွင့်ပြု ချက်မရ ဘဲ သံအမတ်ဆို
သူ က အခု လို ဘဲသူ့ စိတ်ကြိုက် လုပ် လို့ ရ သလား....?။
သံ အမတ်ဆိုသူ က ဒေါ်စု ထက်အာဏာရှိ လို့ လား...? ။
ဒါမှ မ ဟုတ် ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် စေခိုင်းတာ လာ.........???? လို့ စဉ်းစား
(ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတုန်းက "ဝ"အဖွဲ့ ပြန်သွားတုန်းကလည်း MPC ဟောင်း
တွေနဲ့ ချင်းအဖွဲ့တို့ကြောင့်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။)
ကချင်အဖွဲ့က တက်ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ကြောင်း သိရတော့ မြန်မာ သံ
ရုံးက ကချင် ဝတ်စုံတွေကို New York မှာရှိတဲ့ ကချင် အချို့ (လက်ရှိ အခြေ
အနေကို မသိတဲ့) ထံမှ အသည်းအသန် ရှာပြီး မနေ့က ဌားသွား ပြီလို့ သိရ
သံရုံး က ယခုလို ကချင်ဝတ်စုံ ဌားရမ်းသွားခြင်းမှာ ဒေါ်စု နဲ့ တွေ့ ဆုံပွဲ မှာ
ကချင် အဖွဲ့ မှ မတက်ရောက်တော့ မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အခြားသူများအား
၄င်း ကချင် ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်စေပြီး ကချင် အတု လုပ် ကာ အများရှေ့ တွင်
ကချင် လဲ ဤ အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ကြောင်း လူထု အား လိမ်လည် ရန်
အတွက် အကွက်ဆင် နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စု အရင် တခေါက်၊ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက် က USA ကို လာတုန်းကလဲ
အခု လိုဘဲ မြန်မာသံရုံး က အခြား ကချင် လူထု ကိုယ်စားမပြု တဲ့ သူတွေကို
ကချင် ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင်စေပြီး ကချင် အတု ဖြင့် ဒေါ်စု ကိုကြို ဆို ပြီ လူထုကို
အစိုးရ နာမည် ပြောင်းသွားပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ထားရှိတဲ့ ၊ ဆက်
ဆံ တဲ့ ပုံစံ က ဘာမှတိုးတက်လာတာမရှိဘူး အရင်စစ်အစိုးရ ကြံ့ဖွတ် အစိုးရ
အတိုင်းဘဲ အပြောင်းအလဲ မရှိဘူး။
အရင်ကလည်း မြန်မာသံရုံးက ဒီလိုမျိုး လုပ်နေကျပါပဲလေ။
(၂၁)ပင်လုံ ညီလာခံမှာ လဲ ဒီလို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးခေါင်း
ဆောင်တွေရဲ့ နာမည်ရေးတဲ့ အခါ ၄င်းတို့ရဲ့ ရာထူး ကိုထည့် မရေးဘဲ စိုင်းထူး၊
ဂွမ်မော် စသည်ဖြင့် (ဦး)လို့တောင်ထည့် မရေးဘူး၊ ဒီလို စော်ကားခဲ့ ကြပြီးပြီ
ဤ ကဲ့သို့ သောလုပ်ရပ် ဟာ ဒေါ်စု နဲ့ လက်ရှိ NLD အစိုးရ အပေါ် အင်မတန်မှ
အကျည်းတန်စေပါတယ် ။ သို့ သော်လည်း တာဝန်ရှိသူများ (ဒေါ်စု၊ NLD) မှ
ယနေ့ အချိန်ထိ ၄င်း လုပ်ရပ်များအား တစုံတရာ ပြောဆိုခြင်း ၊ အရေးယူခြင်း၊
သို့ မဟုတ် တောင်းပန်ခြင်း ၊ တာဝန်ယူ ခြင်း ဘာမှ မကြားရသေးပါ။
(ဓါတ်ပုံ- မြန်မာသံရုံးမှ Kachin alliance သို့ ဖိတ်ကြားသည့် ဖိတ်စာ။)
American gaw gumshem zai mazut ai Myen Mungdan hte grau ni htep ai hku kanawn sa wa na masa
at 9/17/2016 09:53:00 AM
Hti Yu Ga Law!!!!!!
American Sanction hte Wunpawng Myusha ni
Ra tim n ra tim, American gaw gumshem zai mazut ai Myen Mungdan hte grau ni htep ai hku kanawn sa wa na masa jahkrat sai re majaw, ndai galai shai wa ai lam ni hpe mada azi yu let, sadi maja let matut shakut sa wa na matu ningmu ni hpe loi li garan kachyan mayu ai. Kaga Hpunau ni gaw hpaw wa na chyinghka ndai hpe lang nna gara hku galaw sa wa na ngu ai hpe hkyen lajang let la taw ai grai na sai.
1. American SanctionaPower
American hte hku hkau ai Mungdan ni law law Americanasut masa hkum pat ai lam hpe sadi let yu ai. Ya ten sut bungli galaw ai maigan ni nga taw ai zawn rai tim, American hpe yu nna grai rai nna sut magam n gwi galaw ai lam ni nga ai. Ga shadaw Japan, Korea hte EU ni mung ndai hpe grai yu ai. Dai majaw Myen Mung Atsuya gaw, American Sanction kaw nna lawt mayu ai ngu ai gaw, Kaga mungdan ni law law hte wang lu wang lang hpaga ga mayu ai majaw rai nga ai.
2. Ya na American Sanction hte Myen Mungdan
Ma Kaw Jan wa America du nna American Mungdan Ningbaw Ningla ni hte hkrum shaga, yawng mung grai hkik hkam ai hku hkap tau hkalum la ai hpe mu lu ai. Ndai kaw na matut pru wa ai mahtai ni kaw nna chye lu ai lam n kau mi gaw, American gaw Munghpawm myen mungdan hte grau kanawn sa wa na lam, karum la ai lam ni jaw sa wa na, grau nna gaw Myen Mungdan hpe Sut Masa Pat shingdan da ai kaw nna hpaw dat ya ai lam re. Raitim mara kaba labau lu ai Hpyendap hte Masha Kaba ni hpe gaw sut masa hte America de shang lu na hkumpat da ai lam naw nga ai re.
3. American Sanction Shayawm kau dat ai hte matut byin wa lu ai lam ni
Myen Mungdan hta, Wunpawng Mungdan gaw lu su dik ai mungdaw mungdan re majaw, Arang madu ni myit lawm dik ai mungdaw mungdan mung rai nga ai. American Sanction shayawm kau dat ai majaw Wunpawng myusha ni Sum Machyi ai lam ni nga ai zawn, Amyat mung mai lu wa na re. Ndai ni hpe law law tau myit nna hkyen lajang da ra ga ai.
3.1. Sum Machyi wa lu ai lam
1) Hpyen ai wa gaw American kaw nna karum ai lam hte grau n’gun ja mat wa lu ai.
2) Wunpawng Mungdan kaw chyup sha nga ai Cronies ni mung Sinna mungdan ni hte pawng nna Wunpawng Mungdan de grau gamyet shang wa lu ai.
3) Wunpawng Myusha nialamu ga ni grau tat sum wa lu ai.
4) Arang kaba ai ni grau shang wa na re majaw Wunpawng Sutdu ni hte Amyu Wunpawng sha ni gaw shingjut de grau shang mat wa lu ai.
5) Masha hpan hkum grau shang wa na re majaw, Wunpawng ramma ni hpe akyang jahten ya ai lam ni mung nga wa na re.
Grai naw matut myit yu ga!
3.2. Amyat mai lu ai lam ni
1) Anhteajinghku Maigan myu ni anhte ni htep ai hku grau kanawn wa lu na.
2) Shiga ni grau branglang wa ai majaw, Hpyen wa gaw mi na zawn majoi magoi n mai galaw wa ai. Anhte mung majaw magoi n mai galaw ai.
3) Tarawng tara n nga ai shingra grupyin hpe chyup sha, jahten mat wa ai lam ni mai yawm wa lu ai.
4) Hpyen wa nau n mai mazut mat na.
5) Jinghku maigan myu ni hte hpaga jawm ga wa lu na.
6) Manam ni hte kanawn nna hpaji hparat grau kung wa na.
4. Hkyen lajang da rai ra ai lam ni
Hkyen lajang da chyalu rai ra ai lam ni ngu tsun mayu ai.
1) Shang wa ai manam ni, hpaga hpung ni, atsuya hpe hkang na Mung Masha niansen shapraw lu na shiga matut mahkai lam grai n’gun ja ra ai.
2) Hpyen waagumshem mazut ai lam, masu magaw ai lam ni hpe n sharin la ai sha, tsepkawp koi yen kau ra ai.
3) Shang wa ai manam ni hpe madu tai nna, gwi gwi atsawm hkap hkalum, zinlum nna, bungli jawm galaw kau lu ra ai.
4) Bungli kaba galaw ai lam ni hta, masu magaw n lawm ai sha, ding ding man man, tengman ai hte, hkrunggrin ai lam hpe manu shadan nna galaw sa wa ra ai.
5) Maigan ga rai nga ai, Myen, English, Miwa, Japan, Korea ga ni hta shaga ai lam, ka ai lam, matut mahkai ai lam ni grau kung wa ra sai.
6) Internet, Email, ni hpe ladat jaw jaw grau chye lang wa ra sai.
7) Sut hte seng ai hpaji ni; Business Management hte Administration, Accounting, Marketting, ngu ai baw hpaji amyu ni gaw chye da kung nga ra sai.
Hpa mi rai rai, galai shai wa lam byin wa shagu Amyu Wunpawng sha ni gaw katut taw nga la ai ni (Victims of Change) n re ai sha, galai shai wa ai lam hta amyat lu la ai ni byin hkra hkyen lajang shakut ga ngu tsun let hpungdim dat sai.
Tsawra myit hte,
Kachin Rep’s Speaking Time Cut from State Counselor Meet-and-Greet US-based activists question the rationale for canceling their representative’s speech atacommunity meeting with Daw Aung San Suu Kyi in New York.
“We were told that we would have two minutes to talk,” Gum San Nsang told The Irrawaddy on Friday. But on Wednesday, staff from Burma’s Permanent Mission to the UN called him to let him know that he would not be given time to speak at the event, due to limited space.
At the time of publication, The Irrawaddy was unable to confirm which speakers retained speaking privileges.
Ja Mai, also of the Kachin Alliance, told The Irrawaddy that the move was symbolic, leading her to “question the level that ethnic minorities like us are allowed to truly participate in the process of rebuilding the country.”
Gum San Nsang explained that, had he been given the opportunity to speak to the State Counselor, he would have highlighted the crisis created by ongoing conflict with the Burma Army in Kachin and northern Shan states.
“I wanted to request that she visit Kachin IDP camps and demand an opening of aid relief to border camps,” he told The Irrawaddy, referring to 120,000 civilians uprooted by war and spread across more than 100 displaced people’s camps in northern Burma. The Irrawaddy reported in June that Kachin IDPs must survive on assistance of just US$0.25 per day.
Gum San Nsang was told by UN mission staff that it was Burma’s permanent representative to the UN in New York—and not the State Counselor—who had made the decisions regarding event speakers.
US-based activists question the rationale for canceling their representative’s speech atacommunity meeting with Daw Aung San Suu Kyi in New York.
Women and children pictured in an internally displaced persons camp in Kachin State in early June 2016. (Photo: Moe Myint / The Irrawaddy)
Members of the US-based Kachin community were disappointed by the removal of their representative fromaset of speakers ataNew York meet-and-greet on Saturday with State Counselor Daw Aung San Suu Kyi.
Gum San Nsang, president of the Kachin Alliance advocacy group in Washington, was invited by Burma’s Permanent Mission to the United Nations to the event as an ethnic Kachin representative. The invitation indicated that representatives from different designated groups would be allottedatime slot foraspeech to Daw Aung San Suu Kyi, who will be in attendance.
The Irrawaddy made contact with staff from Burma’s UN mission in New York, but they would not comment on the situation or provide additional information regarding Saturday’s event.
Tu Aung Myitung, general secretary of the Kachin Alliance, regretted that the group had lost “a great opportunity” to speak on behalf of their community, and he remains puzzled by the permanent representative’s decision. “It does not make any sense that they don’t want to give us any chance to speak with Daw Aung San Suu Kyi during the meeting,” he added.
The change to Gum San Nsang’s invitation came only one day after the White House pledged to lift remaining economic sanctions on Burma after meeting with the State Counselor in Washington.
On Monday—only two days before the announcement to eliminate most sanctions—the Kachin Alliance had penned an open letter to US President Obama calling any move to abandon economic restrictions “extremely premature” given ongoing military abuses in Burma, including the systematic use of rape and torture against civilians.
The letter was highly critical of the Tatmadaw—the Burma Army—and their “lack of progress” toward adherence to international human rights standards and democratic norms.
While Gum San Nsang was told the reason given for the cancellation of his speaking time was “limited space,” others speculated whether the decision was connected to the publicity that the Kachin Alliance’s letter received.
“One could question [whether] this is because of our statement,” said Ja Mai. “We feel our voice is being silenced and that the concerns and input of the Kachin community in America are being disregarded.”
Daw Aung San Suu Kyi has been criticized for her failure to condemn Burma Army abuses in Kachin State sinceaceasefire between the Kachin Independence Army and the Burmese military broke down in 2011.
“The army which she repeatedly claims is [her] ‘father’s army’ is the army which her country’s villagers flee from,” Gum San Nsang said, referring to the late Aung San—Burmese independence icon and the founder of the country’s military—who was also the State Counselor’s father.
Onaweekend in September 2012—almost four years ago to the day—Daw Aung San Suu Kyi, thenamember of Parliament, first spoke to members of the US-based Burmese community at Queens College in New York. When asked about fighting in Kachin State, she had said that she “did not want to add fire to the conflict” by criticizing any of the players involved.
To protest what they described as her “silence on the humanitarian crisis in Kachin State,” members of the Kachin Alliance did not attend Daw Aung San Suu Kyi’s Congressional Gold Medal Ceremony in Washington in 2012.
“Takingastand of impartiality in aggression by an elephant againstamouse is not taking the side of justice,” Gum San Nsang said of her position on the conflict.
The Kachin activists—who have opted out of attending the event on Saturday—said it is unlikely that the war and displacement in northern Burma will beatopic of discussion.
Dapba2npu Namti Dapdung 11 ni tinang ginra bai madu lu na matu gasat poi shang nga..
at 9/17/2016 09:44:00 AM
Sinpraw Jaw Gawng
Dapdung 11 ni lai wa sai shaning hta Samhkyeng hte myen hpyen dap ni n gun la ba hte gasat zing la da ai Sahmaw Sutlen yang ginra hpe bai lu madu na matu dai hpawt 17.9.16 am 4:30 kawn ya ten du hkra Dung 11 ginra hte Dung5jarit Nhkrut ning htawn chyang hkrang pa post kaw hpyen n gun kaba hte gasat poi shang nga ai hte shara n kau mi hpe bai lu madu la sai lam shiga na lu ai.Ya ten hta Sahmaw 105 dap ni hte Samhkyeng ပြည်​သူစစ်​ ni n gun bai jat taw nga sai lam shiga na lu ai.ya shiga ka ai ten du hkra gap dingyang re.
Mung shawa yawng mung dang ai kandang hpai na Jin Grim
at 9/16/2016 10:59:00 AM
Tara nlang ai myen tai hpyen ni tinang hpang de laknak kaba majoi gap sharu bun ai majaw T/N maga na marai mali hkala hkrum sai re.
Dai majaw Dap awn daju kaw nna mung hpyen majan hpe tsaw dik hkyen shajin da na hpe matsun da sai re.Hte maren ra wa yang Hpyen waashingdu de htim gasat lu na matu WP sha kanu kawa yawng akyu ja ja hpyi ya na matu mung shana lajin dat ga ai...
Shawng lam myutsaw ni...
at 9/16/2016 10:57:00 AM
သမ္မတအိုဘာမားနဲ့ တွေ့ဆုံတုန်းက ဒေါ်စုမိန့်ခွန်းကို လေ့လာကြည့်ရင် နိုင်ငံကို တိုးတက်စေလိုပြီး ဒီမိုအခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကို ထူထောင်လိုကြောင်း အတိအလင်း ပြောသွားပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီကို တွေ့ဖို့အသွားမှာ အဝေးမှာ သူ့ကို နှုတ်ဆက်နေတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေဆီကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး လာတွေ့တယ်။ ဟိုက ထိုင်ရှိခိုးတော့ သူ့ဆီ လာဖို့ ခေါ်တယ်။ ဒါဟာ သူ့ပြည်သူတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအပေါ်မှာ မိမိတို့ သံသယမရှိဘူး။
ဒါဖြင့်ရင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဘာကြောင့် ပြန်ဖွင့်စေချင်သလဲ။ ဒီကနေ့ ဒီအချက်ကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာအပြောင်းအလဲမှ မရှိသေးပါဘူး။ စနစ်ဆိုးကြောင့် မိသားစုတွေ တကွဲတပြား ဖြစ်ရတဲ့နေရာမှာ ဒေါ်စုလည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သာ ဖြစ်နေတာပါ။ သူ့မိသားစုအတွက် ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ရှာသေးပါဘူး။ ဒါကိုလည်း မိမိတို့ မစာနာဘဲ မနေပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အမေရိကကို လာတဲ့အချိန်မှာ လိုင်ဇာမှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ ဝါရှင်တန်မှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ လိုင်ဇာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က လက်နက်ကြီးနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထမင်းစားနေတဲ့ ရဲဘော်(၄)ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးမူဘောင်ကိစ္စ ပြန်ညှိဖို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မ့ာတပ်မတော်က ရန်သွားစနေခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှိသမျှပိတ်ဆို့မှုကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ သမ္မတအိုဘာမားကို အရေးဆိုနေချိန်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ခရီးကို မထီမဲ့မြင် ပြုချင်တစ်မျိုးပါပဲ။ မဲသဝေါဘက်မှာ DKBA နဲ့ ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲကိုတော့ နောက်မှ ပြောပါ့မယ်။
မြန်မာသံရုံးဆိုတာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိနေရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကလည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို သတင်းပို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခု မြန်မာသံရုံးက နယူးယောက်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ကြဖို့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြင့် အချင်းချင်းသပ်လျှိုမှုများ လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ-ချင်းကို ဦးစားပေးပြီး ကချင်ကို နှိမ်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ မတူကွဲပြားမှုကို အင်အားအဖြစ် အသုံးချမယ်ပြောတဲ့ရက်မှာပဲ ကချင်အဖွဲ့ကို ပေးထားတဲ့ ကတိကို ဖျက်ပြီး ချင်းအဖွဲ့ကိုပဲ ဦးဆောင်စေခဲ့တာမျိုး ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မသိဘဲ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စများ ရှိနေသလား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသိပေးပြီး ဆောင်ရွက်နေတာလား မိမိတို့ မသိရှိရသေးပေမဲ့ မြန်မာသံရုံးဟာ အရင်က လူဟောင်းတွေနဲ့ပဲ စခန်းသွားနေပြီး အရင်က အမူအကျင့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ကောင်းပါပြီ။ မိမိတို့နိုင်ငံကို အမှန်တကယ်ပဲ တိုးတက်စေချင်ရင် မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ မြန်မာသံရုံးက အရင်လိုအချိုးမျိုး မချိုးရပါဘူး။ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ မြန်မာ့သံရုံးတို့ကြောင့်ပဲ အဝေးရောက်မြန်မာတွေဟာ ဒေါ်စုကို အဝေးကနေ နှုတ်ဆက်ရတာပါ။ ဒေါ်စုကလည်း ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်ကနေ ထွက်လာပြီး ဒီပြည်သူတွေကို လာတွေ့ရတာပါ။ နောက်ပြီး စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ မဆန့်ကျင်သူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေဆဲပါ။ ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့လိုပဲ ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မအရ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ စီးပွားရေကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးက စီးဝင်သွားမယ်။ ဒီကုန်သွယ်ရေးကို ဘယ်သူက လက်ဝါးကြီးအုပ်သွားမလဲ။ ဗမာတွေကို မုန်းတီးလို့ ပြောတဲ့စကား မဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ မိမိတို့လိပ်ပြာသန့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နဂိုကတည်းက ဗမာတွေကပဲ နေရာယူထားနှင့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကို ဖွင့်မပေးဘူးလို့ ပြောနေပေမဲ့ အမေရိကန်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ ခရိုနီအချို့ကိုတောင် တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးသမားတွေက ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လည်း အစိုးရက လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးထားတာ မရှိပါဘူး။ ကချင်မှာ နည်းနည်း ရှိမယ်၊ ရှမ်းမှာ နည်းနည်းများမယ်၊ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေမှာ အစိုးရနဲ့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိပ်မရှိဘူး။ စစ်တပ်နဲ့ တည့်အောင် ပေါင်းတတ်တဲ့ လူတွေ မရှိသလောက်ပဲ။ ဥပမာ-တနသာင်္ရီမှာဆိုရင် ဒေသခံတွေက စီးပွားရေးကို မပိုင်တေ့ာဘဲ ဗမာတွေပဲ လာရောက်ခြယ်လှယ်နေပါတော့တယ်။ မိမိတို့လိုလားတာက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးကို ဖွင့်တော့မယ်ဆိုခဲ့ရင် မိမိတို့ပြည်တွင်းက လူတွေကို အရင်လေ့ကျင့်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ လူ့အရင်းအမြစ်ဆိုတာ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်ထက် ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြည်နယ်အခြေစိုက် စီးပွားရေးမဟုတ်ဘဲ ပြည်မအခြေစိုက်၊ ဗဟိုအစိုးရလက်ဝါးကြီးစီးပွားရေးပဲ ဖြစ်မှာ များပါတယ်။ ဒါဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် မပြီးသေးပါဘူး။ သမ္မတအိုဘာမားနဲ့ သူ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်း ပြည်တွင်းစစ်မပြီးမချင်း စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဖွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကို မိမိတို့ကြိုဆိုပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ရမှာမဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးနဲ့လည်း မပတ်သက်စေရပါဘူး။ ဒီမှာ မိမိတို့လိုလားတာက မြန်မာစစ်တပ်က ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးမှမဟုတ်ဘဲ မြန်မာစစ်တပ်က နိုင်ငံရေးကနေ ထွက်သွားမှ စီးပွားရေးကို ပြန်ဖွင့်စေလိုခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို မျှမျှတတ တွေးကြည့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ စစ်တပ်က ဘတ်ဂျက်ထဲက (၄)ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဆိုလား ရယူပါတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ကပါ။ လှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအရ စစ်တပ်သုံးတဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို မိမိတို့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတောင် တိုင်းရင်းသားတွေက မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ထိုးစစ်ကို ကောင်းကောင်းမခုခံနိုင်သေးပါ။ တကယ်လို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးအားကောင်းလာခဲ့ရင် တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် နေစရာနေရာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ ဒေသမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလာထောင်လို့ ရှိရင် မြန်မာ့တပ်မတော်က ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကို အထင်အမြင်မှားစေမဲ့လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ပုံချမှာ အသေအချာပါပဲ။ ရန်တိုက်ပေးတဲ့နေရာမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က နံပါတ်တစ်မို့ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်တွေကြားမှာ ဖြေရှင်းရမဲ့ကိစ္စတွေ အများကြီး ဖြစ်လာစရာ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်၊ ဗြိတိန်စစ်တပ်တို့က မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့အမြင်ဟာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူရေးစစ်ပွဲကို အများကြီး အခက်တွေ့စေမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရဟာလည်းပဲ အကျဉ်းထဲအကြပ်ထဲ ရောက်နေကြောင်း မိမိတို့သိရှိထားပါတယ်။ အမေရိကန် စတဲ့ ပြည်ပအကူအညီသာ မရရှိခဲ့ရင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် လိုငွေကတော့ ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတို့အတွက် မဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် လောလောဆယ်မှာ NLD အစိုးရအတွက် ကျားကန်ထားဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဟာ ချက်ချင်းလက်ငင်း စတင်ရမဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာသွင်းကုန်တွေကို အခွန်လျှော့ချပေးတဲ့ကိစ္စဟာလည်းပဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ တကယ်လို့ ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေကို နိုင်ငံတကာစံမီအောင် ပြင်နိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာ့စီးပွားရေးက အနှေးနဲ့အမြန် တိုးတက်လာမှာက အသေအချာပါပဲ။ အလံကတော့ တူတော့ အရှေ့တောင်အာရှက အီသီယိုပီးယားလို့ပဲ ခေါ်စမှတ်ပြုရပါတော့မယ်။ အီသီယိုပီးယားဆိုတာ အဖရိကထဲက ကျူးကျော်စစ်နဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်၊ ရာသီဥတုကြောင့်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကြောင့် လူသန်းချီ သေဆုံးခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝကနေ အခု ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြန်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သတ်မှတ်ရပါတယ်။ မြန်မာက အီသီယိုပီယားလို ဖြစ်ချင်ရင် ပထမဆုံး ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ရပါ့မယ်။ ဒုတိယ-စစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကို ဘတ်ဂျက်ရဲ့ (၁)ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုရပါဘူး။ ပြည်နယ်အခြေပြုစီးပွားရေး ဖြစ်ရမယ်။ လူတိုင်း အခွင့်ထူးခံစားရ။ ဒီလောက်ပါပဲ။
at 9/16/2016 10:49:00 AM
--14/9/2016 ya shana Miwa Mung Yinjiang mare Manau wang kaw myen ni masha (2) sat da ai majaw Miwa Balik ni hku nna Yinjiang grupyin na Myen ni hpe hkan rim jep dat yu yang 15/9/2016 ya shani myen hpyenla majing marai (20) hpe lu rim la ai re lam na chye lu ai. Lai wa sai praw 3-14/9/2816 ya laman Myen hpyen ni gaw Miwa mung Ruili Jegau hku nna mung masha hkying lang let Miwa mung de lai bang nga ai re lam, yaw shada lam gaw kIO ginjaw hpe Miwa hkran hku nna htim gasat lu na matu hkyen shajin ai re lam na chye lu ai.
Aung San Suu Kyi: The 2016 Harvard Humanitarian of the Year
at 9/16/2016 10:44:00 AM
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တုံ့ပြန်မှုကို အမေရိကန်အမတ် စိတ်ပျက်
at 9/16/2016 10:33:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကုးမှု တိုက်ဖျက် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြောကြားစဉ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ပြန်လည်ရရှိသည့် တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ၎င်းအနေဖြင့် ”တစ်နည်းတစ်ဖုံ စိတ်ပျက်မိသည်” ဟု အမေရိကန် ဆီးနစ်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း သတင်းများက ရေးသားထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမေရိကန် ဒုတိယသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်းဒင်တို့နှင့် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က နံနက်စာစားသုံးရင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်စဉ် အဆိုပါကိစ္စကို ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရီပတ်ပလီကန်ဆီးနစ်လွှတ်တော်အမတ် ဘော့ကော်ကာက ပြောကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သေချာစွာ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အသေအချာကို အသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူမရဲ့ နိုင်ငံက လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဒီမနက် ပြောကြားတာတွေကို အထင်အမြင်သေးစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့မှုအတွက် ကျွန်တော် တစ်နည်းအားဖြင့် စိတ်ပျက်မိပါတယ်” ဟု ၎င်းက အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်ဟု ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။
“ဒီကိစ္စမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ မှတ်တမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမက သတိပြုမိမှု မရှိဘူးဆိုတာကို မျက်မြင်တွေ့ရှိပြီးတဲနောက် အပြစ်မရှိတဲ့ လူသားတွေကို အတင်းအဓမ္မ စေခိုင်းဖို့နဲ့ လိင်ကျေးကျွန်တွေအဖြစ် ကုန်ကူးနေတာတွေကို တားဆီးဖို့ သူမအစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အနီးကပ် သေချာစွာ စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်” ဟု သြဇာအာဏာကြီးမားသည့် ဆီးနစ်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ၎င်းကပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရေးမပါသကဲ့သို့ တုန့်ပြန်ကာ စိတ်ပူပန်မှု မရှိသည့်အတွက် ၎င်းအနေဖြင့် မသက်မသာ ခံစားရသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားကြောင်း ဝါရှင်တန် သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သည့် Roll Call က ရေးသားထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအား အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် အဆင့် (၃) တွင် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာသည် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိရောက်စွာ မဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံများအား စောင့်ကြည့် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်က အဆင့် (၂) တွင် ရှိနေခဲ့ရာမှ အဆင့်နိမ့်ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အဆင့်နှိမ့်ချလိုက်သည့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထိုစဉ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှုနှင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာကို အဆင့် (၂)စောင့်ကြည့် စာရင်းမှ အဆင့် (၃) သို့ လျှော့ချခဲ့သည့်အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် အကြံပြုချက်များကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပြီး လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သလို လူမှောင်ခိုကူးမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်များနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို လာမည့် တတိယငါးနှစ် စီမံကိန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်အလိုက် ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို ကဏ္ဍငါးရပ် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဒုတိယသမ္မတ ဟန်နရီဗန်ထီးယူက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ငါးနှစ်စီမံက်ိန်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစ၍ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်(၂၀၁၂-၁၆) သည် အမျိုးသားအဆင့် ဒုတိယ ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ ပဉ္စမနှစ်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်သည် ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း၏ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် တတိယငါးနှစ် စီမံကိန်း ရေးဆွဲသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
သက်ဆိုင်ရာ၏ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် လူကုန်ကူးမှုများ၏ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
Greek AthensaDemocracy gaw n hkum tsup ai. Kachin niaGumrawng Gumtsa (Democracy) masa she hkum tsup ai.
at 9/15/2016 10:21:00 AM
Kachin niaGumrawng Gumtsa (Democracy) masa gaw Greek Athens masha niaDemocracy masaashawngenga lai wa sam ai. Kachin Democracy masa, Gumrawng Gumtsa masa gaw moi chyaloi n hkoi kaw na nga sai rai. Gumrawng Gumtsa Du kata nga nna mung shawa up ai lai masa gaw lawu na mabyin hta npawt da let Greek masha niashawngepyi nga lai wa sai nhten ....
Gumrawng Gumtsa masa (Democracy- δημοκρατία) ngu ai ga hkum gaw “Demos” hte “Kratos” ngu ai Heleni ga kaw rai nga ai. Dealachyum gaw Demos = Mung Shawa (people) hte Kratos = Up hkang ai (rule) ngu ai re. Dai majaw Democracy ngu ai gaw Mung shawa up hkang ai lai ngu lachyum re.
Kachin niaGumrawng Gumtsa (Democracy) byin wa ai lam gaw: Moi Hpung In Hpung Chyan ga hta Hpung Ing hka ngu ai hka langai mi nga ai. Dai hka hkin-gau shara mi kaw Ganghpoi ga hta “Hka - mung - naw, lung - dawn - daw” ngu tsun ai “Hpung Ing Hka Hkrit Mungdawn” ngu ai lungdawn langai mi nga ai. Lani mi hta Tangai Ma Ja Ing ngu ai num langai mi gaw shiakasha ma chyangai hpe sanen hte hkayawp nhtawm nlung lungdawn ntsaetawn u ai. Shingrai shi rai hkrut nga yang ma chyangai hka de hkrat bang mat wa ai. Shi nlung ntsa de mada yu yang ma hpe n mu u ai. Hka de bai mada dat yu ai shaloi hka ntsaesanen yawng taw nga ai hpe mu jang shiakasha hpe hka na baren la sai ngu shi sawn u ai.
Shaloi Tangai Ma Ja Ing gaw yawn dik ai hte “Singgawng Bum Mu e, Nyeatsawra dik ai kasha hpe hkrit mungdawn la-ing na lungka naw barenela nu ai law!7ning re ai Nga Hkaineng hpe ju jaw nna hkungga na law,” ngu nna marawn hkrap shabam let dai lungdawn hpe hkindit u ai. Dai jang jan shingkang akajawng sha nip wa nna mu kaba ngoi ai hte baren hpe achye nna nlung ntsaemara tawn ya u ai. Maamang hpe mung shaw tawn ya u ai. Dai majaw Tangai Ma Ja Ing gaw Dumsa La Yawng ngu ai hpe shaga nhtawm Mu nat hpe ga sadi hte maren,7ning re ai Nga hkaineng langai sat jaw nu ai. Dumsa La Lawn wa jaw ai mungga hpe Mu -sheng Du (Mu Nat Daju) wa grai ra mat ai majaw shi hpe Mu-sheng ga de shaga u ai. Mu-sheng de du ai shaloi lahta Sinlap Mu hpe dai7ning re ai Nga hkaineng hpe dumsa nawng shangun u ai. Dai dumsa ngut jang Mu-sheng wa gaw dumsa wa hpe shaga la nna mare lahkawng hpe madun u ai: marai langai mi gaw mare bug anta ni aje ashin rai, nta wan nat rai, gali galaw, galum kahtam rai nga ai mare hpe shawng madun u ai.
Dai hpang maga mi de na mare hpe madun ai shaloi dai mare gaw mare buga ni, mare lam ni grai pyaw, grai tsawm nna nta galu lu re ai ni hpring nga ai, mare masha ni mung simsa nna nta shagu wanhkut mawng let mare masha ni grai pyaw, grai myit hkrum nga nga ai mare hpe madun u ai da. Dai shaloi Mu-sheng wa gaw dai mare lahkawng kaw na gara mare hpe ra nta? Ngu nna san u yang Dumsa wa gaw simsa let ngwi pyaw ai mare hpe she ra sharawng ai ngu tsun wu ai da.
Shaloi Mu Nat gaw Dumsa La Lawng hpe tsa tsamai mi hte, nbaw shat gum yawn 7, mai-aw ndum hta bang ai tsa dinghkang7jaw dat nna htet dat ai gaw, “Ndai hpe nang kaw sa wa ai mare masha ni hta na matsan jahkrai, gaidaw gaida ni hpe shawng gam jaw u, ngam ai hpe du salang ni hpe jaw jaw u,” ngu htet dat ai da. Dai hpe Dumsa La Lawn wa gaw shiashara de bai du hkra wa ai shaloi mare masha ni hte garan sha yang kahtawng jahku9hpawt sha ma ai da. Mu Natama tsun hte maren dai lu sha ai ni yawng gumlau rawt yang awng mat ma ai da. Dai kaw nna Gumrawng Gumtsa (Democracy) Mung paw pru hpang ai da.
Kahtawng ni hta mare agyi tang san nna up hkang nga ma ai. Mare shawa n ra sharawng jang dai agyi wa hpe jahkrat kau nna kaga htap htuk ai gyi langai mi bai tang mai nga ai. Du prat hta Du waakasha Du bai ga law ai zawn agyi waakasha nan ashe agyi bai galaw ra ai ngu ai lam n nga ai.
Gumrawng Guntsa prat hta ahkun hkanse hta ai lam, ningbaw waanta gap ya ra ai lam, yi hkyen ya ai lam, n nga sai. Tara daw dan lam hta mung myi man n lata ai tara masa lam hpe lang nga sai. Labau hte maren chye lu ai hku nga jang Jinghpaw Wunpawng ginra hta Gumrawng Gumtsa Mung shawng gaw da hpang ai gaw:- Ndup Dumsa Mung,Tang Mai Kawng - Hpung Ing Yang, Mali Hkrang Walawng, N-gum La Shara ni hta rai nga ai. Dai kaw nna she shara shagu paw pru wa ai rai nga ai.
JinghpawaDemocracy lai gaw langai hkrai hpe lit la ai. Matsan, gaida, jahkrai nmai ni hpe npawt da ai Yesualai rai nga ai hpe mu lu ai. Yesu gaw gap ai democratic society gaw langai hkrai hpe lit la ai wuhpawng hte masha nsawn hkrum ai (outcast) ni hpe madung da ai rai nga ai.
Jinhpaw amyu sha ni Democracy gaw Greek Athens ni hta grau hkum tsup ai. Greek Athens democracy gaw num ma ni hte mayam ni hpe masha hku nsawn ai. Ahkaw ahkang n jaw da ai. Garan ginhka da ai. Jinghpaw niaDemocracy lai len gaw Amyu Shayi Num (Tangai Ma Ja Ing)ansen hpe madat ya ai, ahkyak la ya ai kaw na hpang wa ai. Sumsing kum hpa nbaw shat hpe mung matsan jahkrai, gaidaw gaida kaw ni kaw na she hpang nna garan ai. Arawng aya lu ai masha ni, La wangan ni kaw na n hpang ai hpe mu mada ai.Mung shawa kaw nah pang ai. Bottom up re. Chye chyang ai masha lachyawk kaw na hpang ai Top down n re. Lahta na lam ni hpe myit shaku yu nna kaji htum ni hpe shawng sharawt ai, ahkyak la ai Gumrawng Gumsa Mungdan gaw gap sa wa ra nga ga ai. Dai the maren Kachin niamung masa chye na matu gaw Gumchying Gumsa, Gumrawng Gumtsa hte Gumlau niamyit jasat lailen hpe akrit akrai chye na da ra nga ai rai.
Mahta ai laika ni:-
Duwa Lawang Li, Jinghpaw Wunpawng Sha Ni Nga Yu Hkrat Wa ai Ahtik Labau.
Marip H. Naw Awn, Labau Ginshi.
at 9/15/2016 10:12:00 AM
WUNPAWNG Myu sha ni hpe Singapore Mungdan A Su Ya(gov) Kaw nna *KACHIN* ngu ai Amyu Mying hte tara shang PR Jaw ya sai
Labau Sak Se Kadun!
By PaHtau Nsen
Esaia 55:9,Eshta 4:14
Ngai gaw (Du Zahkung Hkawng Je) hte jan Batsam Hawng Nyoi yanakasha ma kaw wa re. Karai Kasangachye ju san san hte tsi sarama bungli hte myen mung kaw manga ning magam gun ngut ai hpang Singapore de1999 hta du sa ai.
Ngai Singapore du ai shaloi ICA form hta amyu mying kachin ngu ai lata na n nga ai. Dai majaw dai ten na Singapore du wunpawng myu sha ni yawng gaw n kam timamyu hpe' Burma' or' Myanmar' ngu ai hpe lata bang wa sai.
Karai KaSangachye ju jaw e2005 shaning htum maga de ngai Singapore PR hpe shawk na daw dan let ICA de form sa shawn ai.
PR application form ka ai Shaloiamyu hta 'Myanmar'ngu n kam ka ai majaw officer hpe san yu yang, n mai ai myen mung masha niaMatu gaw 'shani 'Myanmar' Karen sha mai lata la ai nga sanglang ai..
Myit hta hpa ka tim n ra na re ngu zawn nawn ai majaw ''Kachin'' gasi loi bung ai'Karen''hpe Lata bang dat sai..
6february 2006 shani IC card sa htuk na, card hpe yu dat yangamyu ""Karen ,, nga hti lu ai. A Myu-''KACHIN'' ngu mai galai na matu mai tang shawn na kun ngu Officer hpe san yang, n mai ai sha nga ai.
Dai majaw dai shani PR card lu tim myit hta ai n nga dum let, Karai Kasang Hpe ga san san kau sai. PR card hpe shagu myit hta ai n nga dum let Karai Kasang kaw "KACHIN" ngu aiamyu hpe n dai Singapore ICA hta tara shang byin wa na matu lam madun rit ngu n naakyu grai hpyi ai.
Ngai sha n rai dai ten na Singapore de wunpawng sha ni yawngakyu hpyi ga langai rai na re ngu kam ai.
May2006 hta ICA rung de bai sa n na, IC card kawamyu"Myanmar" ngu mai galai na i ngu officer hpe san yang n mai ai bai nga ai. Raitim ngai na matuahkyak ai majaw, gara hku galaw yang mai na ngu bai san yang, card htuk ai shara na officer kaba hte hkrum shangun ai.
Officer kaba hte mung n mai byin ai majaw kaga officer kaba ni hte hkrum na matu lajang ya ai. officer ni hte hkrum shaga ai shaloi 'Karai Kasang ,lam madun let Karai Kasang shingkang dan dawng na matuakyu grai hpyi sai.
Hpang jahtum htum hta'Birth and Death Department'na kaba htum wa hte hkrum lu ai. "Hpa rai na galai mayu ai i?" nga shi san yang, myen mung hta n ta masha ni na passports shawk ai shaloi rung hta n yak na matu, ngai myen n rai tim shawa lang aiamyu Myanmar hpe hpe bai galai ya rit nguahkang hpyi ai.
Nang hta myen n re ai nga hpa sakse nga ai i?"
Nga majaw ngai na dai daw lekmat (Jinghpaw hte English) hpe madun ai." Laika shawn da u"nga ai majaw"Myanmar"galai ya na matu laika ka nga yang, Nang na Matuamyu"KACHIN" nga yang grau htuk na n re i?" nga shi san wa ai.
Ngai mung "KACHIN " nga ai gaw jaw dik htum rai tim Singapore ICA kaw code n nga ai majaw Myanmar hpe sha lata la ra na sai ngu htan dat ai. Ngai laika ka ngut daram rai wa yang, shi gawk kaw na pru wa let, ya nangamyu?
"KACHIN" nga ai hpe mai lata sai. Ya sha ngai code lajang bang dat ya ai."nga tsun ai shaloi ngai na myit hta Karai Kasang gaw hpyi yang jaw ai Karai, ngu ai hpe Chye ju grai shakawn kau sai.
Manu jahpu hpa shajan n hpyi ai sha lawan dik ai hku garum ya ai dai Officer kaba hpe mung Chye ju dum ga tsun let laika shawn da kau sai.
N dai mabyin kaw na ngai hkam la lu ai gaw mung dan langai hta teng man ai hku woi awn ai ni gaw grai ahkyak ai, mungdan masha ni mung madu na mung hpearawng la let jut shagu kaw na mungdan galu kaba lam hta (dai Officer kaba zawn) shakut shaja yang, Singapore zawn mungkan hta shim lam lu ai, awng dang ai mungdan ni law law nga wa na hpe kam ai.
Karai Kasangachye ju san sanajawePR card ningnan htaamyu "KaCHIN"👈 nga ai hte1August 2006 hta Singapore du wun pawng sha langai hku shawng ningnan tara shang byin na matu hkam la lu sai.
Myenasu ya hpyi yang, lu na n lu na n chye ai. Wunpawng hku hpyi yang mung mai byin na gaw gadai n mai tsun lu ai. Raitim,asak hkrung ai dai Karai Kasang hpe Singapore du wunpawng sha ni myit hta hkam sha let hpyi ai shaloi ,
Karai Kasangaten u ai shaloi Hpa n rai ai ngai hpe shi jai lang let shateng ya ai lam mau hpa hkam la lu ai lam hpe Singapore du wunpawng myu sha niaJinghpaw wunpawng Hka lup hpung (Singapore)20 ning hpring chye ju shakawn poi masat Magazine hta kabu gara let sakse hkam dat n ngai law.
Zahkung Je Naw
( Wai Maw )
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေမှန် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဖွင့်ချပြီ။ ထိထိမိမိ တိတိကျကျြေ
at 9/15/2016 09:47:00 AM
at 9/14/2016 10:13:00 AM